Celtic Muti weHupenyu Akafuridzirwa Tattoos | Kunyora
Celtic muti wehupenyu maTatoo
Susana Garcia | | Tattoos, MaTatoo eMaruva uye Zvirimwa
El muti wehupenyu chiratidzo Yakanga iine kukosha kukuru mutsika dzeCelt uye nanhasi ichiri kukosha kwazvo munyika yetattoos. Kune nzira dzakawanda dzekumirira muti wehupenyu, asi kazhinji nguva dzose vanotarisa pakuisa matavi, midzi nedenderedzwa ravanoumba. Tiri kuenda kunoona kumwe kukurudzira mune izvi kuti tikwanise kutora muti wehupenyu kunyorwa nyora.
Shanduro dzeCelt dzinoshandiswa zvakanyanya mumatato, sezvavakaita mhando dzese dzemhando uye maumbirwo izvo zvine revo huru. Mune ino kesi isu tichaenda kunoona zvinoreva muti une mukurumbira wehupenyu uye kuti vanhu vangani vakaushandisa senge yavo nyora.
1 Zvinoreva muti weupenyu
2 Chaiye muti wehupenyu tattoo
3 Yemazuva ano dhizaini
4 Ruvara rwemuti wehupenyu maTatoo
Zvinoreva muti weupenyu
El muti wehupenyu waive wakakosha zvakanyanya mutsika dzechiCelt. Ichi chiratidzo chinotaura nezve nyika iri mberi, iyo inomiririrwa nemidzi, uye yehupenyu, iyo inomiririrwa nemuti. Iyo denderedzwa yagara iri mucherechedzo wekukwana uye inogona kuonekwa mumuti uyu sezvo uchitaura nezve kutenderera kwehupenyu. Kune rimwe divi, muti uyu waimiririra kukosha kwavakapa kune zvakasikwa uyezve nemhuri nekudzivirira.
Chaiye muti wehupenyu tattoo
Mumufananidzo uyu tinoona nyora inoshandisa chiratidzo chechinyakare yemuti wehupenyu, isina mazuvano kana akasiyana mazano. Muti unogadzira denderedzwa nematavi awo nemashizha. Mune ino kesi ivo havaise zvakanyanya kusimbisa pamidzi, kunyangwe mumatato mazhinji ivo vanoonekwa.
Yemazuva ano dhizaini
Iyi tattoo inotova ne bata zvakanyanya zvemazuva ano. Iyo inokurudzirwa neiyo minimalist bata yemuti, iine matavi asina chinhu. Kune rimwe divi, denderedzwa rinomiririrwa nechitema chinoratidzika kunge chakagadzirwa nemvura yemvura.
Ruvara rwemuti wehupenyu maTatoo
Kana iwe uchida mavara ane mavara, unogona kutarisa izvi miti izere nemhando. Pfungwa yakakwana kana isu tichida yakazara yakazara tattoo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Tattoos » Celtic muti wehupenyu maTatoo
Halloween maTatoo 2019 kunakidzwa nepati
Mateki ekunyepera, mhinduro yeanonyanya kusagadzikana